Caafimaadka – Goobjoog News
Ilaalinta nadaafadda deegaanka waxa ay mas’uuliyad ka saaran tahay bulshada ku nool deegaanka iyo sidoo kale maamulka meesha ka arrimiya. Webiga shabeelle oo dhex mara magaalada Afgooye ee gobolka shabellada hoose kama jirto wax nadaafad...
Wararka ka imaanaya gobolka Shabellaha Dhexe, ayaa sheegaya in 10 qof oo u badan carruur ay cudurka shuban biyoodka ugu dhinteen deegaanka Daymasame ee gobolkaasi. Waxaa jira dad kale oo uu hayo xanuunka cudurka shuban...
Maamulka degmada Buulo-burde ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in cudurka shuban biyoodka uu ka dilaacay degmadaasi iyo sidoo kale deegaannada ku dhow. Cabdi Daahir Guure oo ah guddoomiyaha Buulo-burde oo wareysi siiyey Goobjoog News, ayaa...
Dadbadan waxay aaminsan yihiin in daangada(Saloolka) la cuno xilliga nasashada iyo marka telefishinka la daawanayo, waaxse ka maqan faa’iidooyinka caafimaad ee ay leedahay, gaar ahaan marka guriga lagu diyaariyo. Daangada si sahlan ayaa loo diyaariyaa...
Korriimada ay sameeyaan unugyada jirkeenna ayaa ka dhigan dhammaadka shaqooyin badan oo jirkeenna gudihiisa ka socdo, korriimada waxa ay martaa wadiiqooyin nidaami ah; billowga hore unugyada waa ay koraan, marka ay intii loogu talagalay ay...
Wasaaradda Caafimaadka ee dowladda federaalka ah, waxaa ay sheegtay in ay diiwaangelisay dad badan oo qaba cudurka Juudaanka in ay ku noolyihiin Magaalada Muqdisho. Wasiir Fowsiyo Abiikar Nuur ayaa sheegtay in cudurkan ay qabaan dad...
Dowladda Rwanda oo noqotay dowladdii ugu horreysay oo Sabool ah dadkeedana u sameysay dhammaan daryeel caafimaad oo dhanka indhaha kuwaasi oo gaaraya tiro ahaan 12 Milyan oo qof. Xukuumadda Rwanda oo kaashaneyso ururka aragtida dadka...
Degmada Waajid oo ka tirsan 5 degmo ee gobolka Bakool, Koonfur galbeed Soomaaliya ayaa laga soo sheegayaa dhibaato caafimaad, gaar ahaan dhanka adeegyada. Dr. Cabdisalaam Axmed ayaa Goobjoog News uga waramay xaaladda caafimaad ee degmada...
Cilmibaarayaal ka tirsan jaamacadda Paris ayaa helay xubinta ugu heerkulka badan jirka aadanaha uu kulkeedu gaarayo 500C, waa mitochondria oo ah halka ay tamarta ka heleen dhammaan unugyada nool ee jirka aadanaha. Illaa iyo wakhti dhow waxaa loo haystay in...
Wararka ka imaanaya gobolka Sool ayaa sheegaya in shil sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira uu saakay ka dhacay duleedka degmada Laascaanood ee gobolka Sool. Gaari nooca loo yaqaano NOHA, kana baxay magaalada Gaakacyo...